Na A yunifọm Teasing gị Heartstring WM Dolls
100cm-120cm Dolmụ bebi 120cm-140cm Dolmụ bebi 145cm-150cm Dolmụ bebi 150cm-160cm Dolmụ bebi 160cm-170cm Dolmụ bebi
Caroline-Lee ya na uwe na-akwa njakịrị gbasara mmekọahụ gị
* Efu - Isi ọzọ
* N'efu - Masturbator anụ ahụ
* Efu - Uwe ndị ọzọ
* Ọfẹ - 10x Condom
157cm Cup B iko）
162cm （E Cup）
166cm Cup C Cup）
164cm （H Cup）
172cm Cup B iko）
172cm （D Cup）
Shrug (+ $ 0)
❤ Ngwaahịa na California.
❤ US nnyefe oge 3 ruo 5 ụbọchị azụmahịa.
❤ 100% Enweghị nsogbu.
A na-eme ụmụ bebi mmekọahụ a na ụlọ nkwakọba ihe USA ma dị njikere iji ụgbọ mmiri. Dolmụ bebi na-abata n’ime ụlọ zuru oke ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmịnye nwa bebi ọsịsọ na echeghị oke banyere ịhazi ya. Ozugbo emere iwu gị, nwa bebi gị ga-ebupu n'ime ụbọchị azụmahịa 1-2 ma rute n'ọnụ ụzọ gị n'ihe dị ka ụbọchị azụmahịa 3-5 (naanị USA).
Anyị abụọ na di anyị na-arụ ọrụ n’otu ngalaba, ma anyị na-eme mfegharị ruo ọtụtụ ọnwa. Di m na-arụ ọrụ, mana m na-arụ ọrụ abalị. Otu abalị, anyị mechara kwupụta ibe anyị na anyị abụọ chọrọ imekwu ihe, ma mesịa hụ ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ịntanetị nke IM na-arụ ọrụ. N'abalị na-eso ya, anyị nwere "ụbọchị" oge niile iji pụọ igwu egwu, anyị chere na anyị nọ naanị anyị. O di nwute, otu enyi ochie ya biara na obodo ahụ tupu atụ anya ya. N'iburu ọnọdụ alụmdi na nwunye m, anyị kwesịrị ịchịkwa ihe niile. Ma enweghị m ike ilepụ anya n’ebe ọ nọ. Mgbe m pụrụ iku ume, onye ọrụ ibe m sooro m, anyị mechara nwee nnọkọ siri ike n'azụ ụlọ ya.
Urdolls na-enye gị akwa bebi na-enwe mmekọahụ nke ọkachamara mepụtara WM. Dolhụnanya doll nke akara WM bụ nke ihe TPE. Akara a na-agba mbọ ime ka ụmụ bebi TPE nwee mmekọahụ na ọnụ ala na ngwaahịa kachasị mma. Anyị na-ekwe gị nkwa na ị ga-enweta otu nwa bebi dị ka foto a. Ọnọdụ mmekọahụ ọ bụla ga-ekwe omume. Zọ 4 nke ntụrụndụ: ikpu, ara, ọnụ, na ahụ ike iji nweta mmetụta nke mmekọrịta na ezigbo nwa agbọghọ. Anyị na-mere nke TPE, ndị kasị mma ọgwụ silicone ihe onwunwe, na mbụ na klas mma.
❤ Ezigbo bebi anyị bụ silicone ọgwụ na-adịghị mma ma na-adịghị egbu egbu (TPE), nke fọrọ nke nta ka ọ dị nro dịka ezigbo ndị mmadụ.
❤ Anyị nwere nnukwu nhọrọ nke nhọrọ maka bebi ịhụnanya nke nha na ụdị dị iche iche.
Brand: WM nwa bebi
Elu ： 157cm B-iko
Ibu ibu ： 29kg
Bust zuru ： 68.5cm
N'okpuru ust 63cm
N'úkwù ： 56.8cm
N'úkwù ： 83cm
Lkwụ Ogologo: 21.5cm
Ubu Obu: 33cm
Olu Omimi: 18cm
Anus Omimi: 15cm
Oral Omimi: 12cm
Eduhie Elu Anya B Cup Emma Finn Egwuregwu Red Roll Hair TPE 157 ...
$ 1,450.85 $ 1,450.85
Akụkọ ndabere Emma: know maara na ụmụ agbọghọ na-acha uhie uhie bụ ndị kachasị ịhụnanya na mmụọ. Lelee mara mma nke mara mma nke nwere ahụ mara mma na ihu dị mma - ịchọghị ịhapụ ime ụlọ. Emma nwere obi uto ma di ndu, ma dika nwanne di ogologo, a gha agha ...
Nnukwu Nwanyị Nwanyị Na-agba Anya Anya Miranda 100CM Na-adịghị Mma Mma TPE A ...
$ 913.86 $ 913.86
Ihe omuma nke Miranda: Akpukpo aru ya di nma site na ihe di nma, ya na aru ya di nma ma nwekwaa obi uto ka gi na ya noo. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe kachasị ahụmịhe nke onye ọlụlụ gị, mgbe ahụ ọ bụ nhọrọ kachasị mma gị. "Biko trea ...
Sexy Long Legs Princess Sex Doll Nancy Nick Blue Blue Anya Nnukwu ara ...
$ 1,545.50 $ 1,545.50
Akụkọ ndabere Nancy Nick: "you ga-achọ ịlụ ọgụ maka mma agha m, weghachite ala furu efu, ma soro m, onye agha m wulite usoro ndị eze." Nancy gwara ndị nọ n'okpuru. Ọ naghị agbatị mgbatị ahụ, ya na mpempe akwụkwọ isii mara mma ma sie ike, na-agaghị ada mbà. Rapara na mkpali nke otu ...
Ebughibu Isi Nnukwu Anumanu Claire Julian Green Anya 148CM Mmekọahụ Doll Ad ...
$ 1,879.00 $ 2,121.46
Akụkọ ndabere Claire Julian "Ara m siri ike. Ha na-ama jijiji mgbe niile mgbe m na-emega ahụ. Ọ ghọwo ibu m. Ha na-ebuwanye ibu. Amaghị m ihe ọ pụtara, enwere ike ha nwere Ọrụ ndị ọzọ dị mkpa karị. Biko lee anya m n’anya gwa m n’olu dara ụda, ị chọrọ ...
Noble Angel Yan Long Legs Nnukwu ara 163CM Mmekọahụ Doll TPE Okenye ...
$ 1,725.01 $ 1,725.01
Akụkọ akụkọ akụkọ Angel Yan: Onye ọ bụla na-achọ onye ọlụlụ mkpụrụ obi, ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ịchọta ya, owu ga-ama ha. Ozugbo i hulatara iji lee nnukwu ịnyịnya ibu ya anya, ọ na-esiri gị ike ijide onwe gị. Ọ na - eji ọkpụkpụ nchara na nkwonkwo akwara iji mee ka mgbanwe dị iche iche, na - enye gị ohere ịnụ ụtọ m ...
Ọnụ Ọgbụgba Nnukwu Nnukwu Anwụrụ 153CM Sophia Lily Silver Long Hair TPE Ad ...
Akụkọ banyere Sophia Lily Obi ya gbara okirikiri ma sie ike, a na-ejide ya oke mana ọ na-ama jijiji. Mgbe ị banye n'ime uko ọtụ, kụrụ ya megide mgbidi. Want chọrọ nke ahụ. Mba? Ebe a ga-emebi gị maka nhọrọ. Kpebie ịgbanwe ndụ nwoke na nwanyị na-ewere ya na ọkwa ọzọ. "Fro ...
Christmas Mature Mma Vanessa Big Anụ astskwụ Ogologo ụkwụ Okenye Enti ...
Akụkọ banyere Vanessa Cheedị banyere nwanyị nwere nsọpụrụ, na-erube isi nwere ihu na ahụ mara mma, dịka ya. Agaghị anwa anwa jụ onyinye a. Cheedị na agbụ ndị a na-ahụkarị n'obodo anaghị emetụta ịma mma a nke ibi na mba ahụ? Ihere adịghị eme ya igosipụta ahụ ya na-enweghị ntụpọ, especia ...